PressReader - Ilanga: 2017-10-26 - KUSOLWA IZINKINGA KUMFUNDISI OZIBULELE
KUSOLWA IZINKINGA KUMFUNDISI OZIBULELE
Ushiye incwadi exolisa
Ilanga - 2017-10-26 - Front Page - LUCKY CAIN noNONHLAKANIPHO SHINGA
KUSHAQISE amalunga ebandla nawomphakathi waseLovu, eningizimu yeTheku ukuzibulala komfundisi wakule ndawo okubalulwa izinkinga ebezidlula ikhanda njengembangela yokuziyisa kwagoqanyawo ngesonto eledlule.
Kulezi zinkinga eziholele ekubeni uMfu Nhlanhla Ngcobo weGod’s Glory Ministries yakhona eLovu, azibulale, kubalwa ukuhlubuka kwabazalwane ebandleni nezinkinga emshadweni. Ukuzibulala kwakhe kwandise amahlebezi okuthi kubhoke izinkinga emshadweni wakhe njengoba kuthiwa yena nenkosikazi yakhe, uNkk Jabu Ngcobo, bese behlala ngokuhlukana.
“Umama utholile ngalokhu wabona ukuthi kungaphezu kwakhe, wakhetha ukuthatha izingane zakhe wabuyela kwelakubo eMpumalanga. Ngemuva kwalokho amalunga ebandla nawo aqalile ashiya kancane kancane ebandleni kwagcina sekunezinkinga.
“Ibandla bese lingasenayo imali, kangangokuthi umfundisi ubesefuna ngo-dli nemali kaSonto Sikole” kusho umthombo. Ngokuthola kwaleli phephandaba, uMfu Ngcobo ubesola umkakhe ukuthi ujola nomunye umculi we-gospel - igama lakhe siligodlile - ngoba eke wacula naye phambilini.
“Ubehlala ekhala ngobudlelwano bomkakhe nalo mculi kwazise ubeze alibeke ngembaba elokuthi akabuqondi kahle,” kusho umthombo. Uthi nokushiya kwamalunga ebandleni bekumhlukumeza njengoba ebengasiqondi isizathu sokushiya kwawo.
Omunye umthombo uthi isizathu sokuhlala ngokuhlukana kukaMfu Ngcobo nomkakhe wukuthi inkosikazi ibingasagculisekile ngendlela izinto ebezenzeka ngayo emshadweni. UMfu Ngcobo ubengomunye wabahola indumiso ebandleni iChesterville Christian Church eholwa nguMfu Themba Mahlaba ngaphambi kokusungula ibandla lakhe. UNkk Ngcobo uzikhahlele ngazo zombili izinsolo zokuthi ubesehlala ngokuhlukana nomyeni wakhe.
“Kungamampunge okushiwo ngomshado wethu, ngeke ngiphike ukuthi bezikhona izinkinga njengakuyona yonke imishado kodwa okwenzeke kumyeni wami kakuhlangene nazo, kuthinta kakhulu ibandla. Kuyaziwa ukuthi ukuba kwami seMpumalanga bekudalwa wumsebenzi njengoba ngisebenza khona kodwa bengibuya njalo ngezimpelasonto kanti uma kumatasa bengibuya ekupheleni kwenyanga,” kusho uNkk Ngcobo.
“Ushiye incwadi exolisa ngesenzo sakhe, waveza nokuthi uyangithanda ngiziphathe kahle izingane,” kuveza uNkk Ngcobo onealbhamu esihloko sithi “Wangilwela” edidiyelwe nguSipho Makhabane. Ukuphikile ukuthi umyeni wakhe uke wamsola ngokujola nomculi we-gospel.